Mashruucyada Wiki U-La Xiriira ee hadda
Waa kuwee Yaa doonaya lacagtaada si aad u sameyso Wii U Game
Qaadashada cashuurtu waxay noqotey wax wayn oo ganacsiga ciyaaraha indie, ugu horreyntii mahadsanida Kickstarter, ganacsatada goobta ayaa isticmaali kara inay isku dayaan oo ay helaan maalgalinta mashaariicdooda. Boggan waxaa lagu soo bandhigayaa munaasabadaha lagu ciyaaro mashruucyo badan oo rajo gelinaya Wii U. Ugu dambeyntii waxaan u guuraa cayaaraha si rasmi ah loo shaaciyey, liiska kulamada lagu dhawaaqay ee Wii U , laakiin waxaan go'aansaday in aan si aad ah u sameeyno, sida ciyaaraha kickstarter ee badani u muuqdaan inay uumi baxaan.
Meelo badan ayaa leh qeexitaan aad u xaddidan oo ah in ciyaaruhu iman doono Wii U. Tusaale ahaan, waxay ku qori doonaan cayaar ku yaal boggan sababtoo ah wareysi uu soo saaray ku yiri horumariye, markii la waydiiyay, in aysan meesha ka baxin konsole. Ciyaartoyda hoos ku taxan waxaa ka mid ah kuwa soo-saaraha si gaar ah uga sheekeynaya Wii U oo ah hadafka goobta.
KA MID AH MASHRUUCA SHARCIYADA
Ciyaar : Almag
Sharaxaad : 2D RPG oo leh qaab muuqaal aan caadi ahayn.
Gool : $ 40,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad ah: sare loo qorsheeyey PC iyo Wii U ama NX.
Rajo : DOA: Waxay noqon doontaa mucjiso haddii ay u sameeyaan .00075 oo ah hadafkooda.
Dhamaadka kama dambaysta ah : Juun 11, 2016? (Hadaad u sheegto IndieGogo)
Cayaaraha : Dareemayaasha (Pixel Barrage)
Tilmaanta : RPG-ka warqad ahaan.
Ujeedo : $ 175,000
Mudnaanta Wii U : Dhexdhexaad dhexdhexaad ah; mid ka mid ah himilooyinka ugu sarreeya ee $ 400,000.
Rajada : Si dhakhso ah u sheeg.
Wakhtiga kama dambaysta ah : Juun 3, 2016
Ciyaarta : Ren Hu: Rebel Yell (Lethal)
Sharaxaad : Beat'em Up.
Gool : $ 28,949
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; mid ka mid ah himilooyinka hoose ee 50,250 €.
Rajo-darrada : Maaha weyn; ballan-qaadyadu waxay ku imanayaan si aad u hooseeya xawaaraha.
Wakhtiga kama dambaysta ah : Maarso 28, 2016
FADLAN LA QAADANAYO (Wii U Definite)
Ciyaarta : Yooka-Laylee (Playtonic)
Sharaxaad : "Nabadgelyo ruuxi ah" ilaa N64 mashruuca Banjo-Kazooie .
Miisaaniyad : £ 2,090,104
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; sii deynta dhamaanba dhammaan barnaamijyada iyo kombiyuutarada kale.
Maalgalin : Juun 16, 2015
Ciyaarta : B loodstained : Caadi ah Habeenkii (Koji Igarashi)
Tilmaam : 2D dhinacyada isgaadhsiinta ee ku yaala xadka Castlevania , oo Igarashi uu ahaa qayb weyn.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 5,545,991 / 500,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : dhexdhexaad ah; waxaa loo soo bandhigay sida $ 3,000,000 oo ah bartilmaameedyo kala duwan.
Maalgalin : Juun 12, 2015
Ciyaarta : Sydney Hunter iyo goobaha dhimashada (John Lester)
Sharaxaad : Ficil-tallaabo ah SNES.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 39,252 / 10,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; Goolka $ 30,000 oo ah waxa uu ka dhigayaa qunsulka saddexaad ka dib SNES iyo NES.
Maalgalin : May 30, 2015
Ciyaarta : Inside Inside Inside (NeoStream)
Faahfaahin : Hawl-qabasho xiiso leh-RPG.
Miisaaniyad / Ujeedo: $ 306,515 AUD
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad hooseeya. Wii U dheer oo lagu daray maalmaha soo socda, inkastoo mid ka mid ah macquul ah.
Maalgalin : May 25, 2015
Ciyaarta : Song of Seven: Cutubka 1 (iftiin)
Faahfaahin : Ciyaarta macmalka ee dhibcaha iyo meesha lagu riixo.
Miisaaniyad / gool : $ 8,000 / 8,544
Mudnaanshaha Wii U : Heer sare; mid ka mid ah saddexda barnaamijyada, oo ay weheliyaan PC iyo PS4.
Maalgalin : March 26, 2015
Ciyaarta : Cucumber Super / Down Drain (Cubicorn)
Sharaxaad : Laba jibbaar wax lagu ciyaaro.
Miisaaniyadda / yoolka : $ 10,149 / 10,000
Mudnaanshaha Wii U : Heer sare; saldhigyada aasaasiga ah waa PC, PS4, iyo Wii U.
Maalgalin : Maarso 22, 2015
Ciyaarta : Sneaky Ninja (Starfall)
Faahfaahin : Isticmaal riwaayad isdabamarin.
Miisaan / yool : $ 10,867 / 10,000
Mudnaanshaha Wii U : Heer sare; Kaliya saldhigga aasaasiga ah ee saldhigga ah oo la barbar dhigo qaababka PC
Maalgalin : Maarso 12, 2015
Ciyaarta : Xoogga Dhamaadka Gundhigga (Ivent)
Tilmaam : 3D Dagaal Cayaarta / Brawler.
Miisaaniyad / gool : $ 88,093 / 14,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; yoolka ugu hooseeya ee guryaha-konsole ee $ 40,000.
Maalgalin : Maarso 11, 2015
Ciyaarta : Carruurta Morta (Dhimashada Dhimashada)
Sharaxaad : Kombiyuutarka dib u celinta.
Miisaaniyad / yool : $ 108,938 / 65,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; Hadafka goolka.
Maalgalin : Febraayo 19, 2015
Ciyaarta : Hollow Knight (Cherry Team)
Faahfaahin : Isticmaal qurux badan.
Miisaaniyadda / Himilada : $ 57,138 / 35,000 (AUD)
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; kaliya qunsulka oo lahaa gool ujeedo.
Maalgalin : December 18, 2014
Ciyaarta : Xayawaanka Xoolaha [Reborn] (Weli)
Sharaxaad : 2D tallaabo hoose-hoos-u-kicin ah.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 26,775 / 26,000
Mudnaanta Wii U : Heer sare, kaliya qoondeeynta goolka salka.
Maalgalin : November 7, 2014
Game : Heroes Waligaa Lose: Professor Puzzler's Qosolka ah (Osama Dorias)
Faahfaahin : Ciyaar ficil ah.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 13,333 / 9,000 (CAD)
Mudnaanta Wii U : Dhex dhexaad ah; kaliya qunsuliyadda ayaa la maalgeliyaa.
Maalgalin : Oktoobar 9, 2014
Ciyaarta : Jaahwareer (Josh Hano)
Faahfaahin : Dacwad-oogis xeel-qaboojiye ah oo aad adigu tahay qofkii afduubay princess-afduubka.
Miisaaniyadda / Abbaaraha : $ 50,331 / 50,000
Mudnaanta Wii Ujeedo: Highigh, kaliya qandaraaska loo qorsheeyay, inkastoo ay sidoo kale u iman doonto dhammaan jilitaanka PC.
Maalgalin : Sebtembar 19, 2014
Ciyaarta : Dareemo: Looma Baqeyn Lahaansho (Kurbejin)
Qeex : MMORPG
Miisaaniyad / Himiladii hore : $ 52,022 / 50,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad, ayaa ugu horreyn u soo baxaya kombuyuutarrada marka hore, ka dibna waxay u soo baxaan afar konsol.
Maalgalin : Sebtembar 12, 2014
Ciyaarta : Hive Jump (Shaxda Shaxda)
Faahfaahin : Isticmaal qoob-ka-shaqeeye oo loo yaqaan 'kumbuyuutar' oo loogu talagalay 1-4 ciyaartoy.
Miisaaniyadda / himilada asalka ah : $ 58,675 / 50,000
Mudnaanta Wii U : Dhex dhexaad ah; waa qunsuliyadda la isku halleyn karo oo kaliya, laakiin waxay noqon doontaa ka dib marka la daabaco PC-ga.
Maalgalin : Sebtembar 6, 2014
Ciyaarta : A Rite ka Stars (Risin 'Goat)
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 41,302 / 40,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad, mid ka mid ah mashaariic dhowr ah oo la qorsheeyey.
Maalgalin : Sebtembar 5, 2014
Ciyaarta : Casriga Casaanka ah: Inner World (Yanim)
Tilmaam : Nidaam-xaglaha xaglaha ah ee horay ugu fashilmay Kickstarter sida Red Goddess .
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 40,235 / 30,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad. Mid ka mid ah lixda mashruuc ee qorshaysan.
Maalgalin : Juun 6, 2014
Ciyaarta : Hover (Midgar)
Sharaxaad : ciyaarta parkour; Jet Set Radio wuxuu la kulmayaa Mirror's Edge .
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 116,398 / 38,000
Mudnaanta Wii Ujeedada: Dhexdhexaadkeedu hooseeyo, maadaama uu ahaa goolka ugu sarreeya (oo la daboolay), laakiin waxay ku rajo galinayaan ciyaaraha asymmetric ee Wii U.
Maalgalin : May 22, 2014
Ciyaarta : Popup Dungeon (Ring Runner)
Faahfaahin : "Waraaqo roggo" RPG "oo leh hab aad u casri ah.
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 100,946 / 80,000
Mudnaanta Wii U Dheer : Dhexdhexaad ah: Horumarinta ayaa sheegay in ujeedkooda Wii U uu ka dhigi doono inuu si dhakhso ah u dhaco, laakiin waxay ahayd qeexitaan loogu talagalay konsole. Hadafka goolka ayaa la gaaray saacadaha ugu dambeeya
Maalgalin : May 18, 2014
Ciyaarta : H eart Forth, Alicia (Alonso Martin)
Faahfaahin : Isticmaaliyaha taraafikada / RPG.
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 232,365 / 60,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaadkeedu hooseeyo: Waxaa lagu darey sidii goolal iskudhaf dhexdhexaad ah, laakiin way sameeyeen.
Ciyaarta : Shaqo-fiid : Abuur Dabeecadeed (Wax-soosaarka Deez Big Big)
Sharaxaad : Kala soocista cayaaraha 1994 ee aan la guuleysan.
Miisaaniyadda / himilada asalka ah : $ 473,884 / 450,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; Asal ahaan Wii U wuxuu ahaa bartilmaameed farabadan, inkastoo hadda ay tahay mid ka mid ah lixda barnaamij ee loogu talagalay.
Ciyaarta : Cosmochoria (Nate Schmold)
Faahfaahin : Waxaad xakameysaa qaxwaha qaawan oo qashinka ah.
Miisaaniyadda / himilada asalka ah : $ 28,696 / 10,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad, waxa uu ahaa goolkii ugu horeeyay ee saldhiga konsol, waxayna sameeyeen.
Ciyaarta : A pexicon ( Actos )
Tilmaam : Puzzle-RPG, nooca ugu caansan ee matalaya Puzzle Quest .
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 5,638 / 5,000
Mudnaanshaha Wii U : Heer sare; waxaa loo qorsheeyay kombuyuutarka iyo Wii U, waxayna horeba uga shaqeynayeen nooca Wii U.
Game : Earthlock: Festival of Magic (Ciyaaraha Barafka)
Tilmaanta : RPG.
Miisaaniyadda : $ 178,193
Mudnaanta Wii U : Dhexdhexaad dhexdhexaad ah; Qorshuhu waa inuu u sii daayo kombiyuutarada Q1 2015 kadibna u sii daayo guurka xiga, oo ay ku jiraan Wii U, Q2 2015.
Ciyaarta : Reven
Faahfaahin : Gawaarida xakameynaya kaas oo i xasuusinaya barnaamijkii hore ee PC-ga.
Miisaaniyadda : $ 33,008
Muhiimadda Wii Heerka sare: Sare: La qabsasho daaqada, oo ay la socdaan PC / Mac OSX / Linux.
Faahfaahin: Hawlgallo garab-dugsi-horaad ah / RPG.
Miisaaniyad: £ 30,647
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad: Hadafka ballaarinta.
Tilmaam: 3D Platformer.
Miisaaniyadda: $ 43,831
Mudnaanta Wii U: Dhex dhexaad ah; markii ugu horreysay ee gool laga soo dhaliyo, markii loo aqbalay sidii loo horumarin lahaa Nintendo waxay go'aansadeen in ay u guuraan Wii U in ay bartilmaameed u noqdaan mid ka mid ah meelihii aasaasiga ahaa.
Ciyaarta : Churbles
Tilmaanta : "RPG-ga oo aad u adag".
Miisaaniyadda : $ 28,487
Ciyaarta: Janno Lost: Qofka La Xiriira
Qeex: Retro 2D naqshadeeyaha xajinta.
Miisaaniyadda: $ 144,960
Mudnaanta Wii Ujeedo: dhexdhexaad ah: mid ka mid ah meeqaanka hore, laakiin ma noqon doonto maalin fasax ah.
Ciyaarta: Siyaad 33D
Sharaxaad: "Cabsida Roguelike."
Miisaaniyadda: $ 3,010
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad: Waxay ku taxan yihiin wax kasta oo qurux badan.
Ciyaarta: Nuura iyo Nalalka Dabka
Faahfaahin: Hawlgal Wax-Qabasho
Miisaaniyadda: $ 43,768
Mudnaanta Wii U: Dhex dhexaad ah; waxay ka muuqan doontaa Wii U ama taariikhda ku dhow.
Ciyaar: Habeen Daraasad
Faahfaahin: Meel dhibco sawir leh iyo guji xiiso
Miisaaniyadda: $ 803
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad; mid ka mid ah dhowr goobood oo ay qorsheynayaan.
Ciyaarta: Guddiga 'N' Board '
Sharaxaad: "Fikrad rigoore ah oo xiiso leh RPG."
Gool: $ 8,585
Mudnaanta Wii Ujeedo: Sare. Inkastoo Wii U aysan ahayn asal ahaan qorshe ah, markii ay qaateen xirmo Wii U ah waxay magacooda ku magacaabeen "Gacan 'N' Guddiga - Hadda imow Wii U!" Sidaa si cad ayaa ay ugu faraxsan yihiin fikradda.
Ciyaar: Kalaware kale
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad: Mid ka mid ah 7 mashruuc oo la qorsheeyay (inkastoo midka koowaad ee liiska lagu qoray).
Tilmaam: RPG dib u xajin.
Miisaaniyadda: $ 81,458
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad; yoolka lagu gaadhay.
Ciyaarta: Terra Incognita
Sharaxaad: "A RPG Routing waxyooday"
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad: Hadafka tartiib tartiib tartiib tartiib ah
FADLAN LA QAADANAYO (Laakiin Ujeedada Wii Ujirta Aan Loo Qalmin)
Ciyaarta : Moira (Onagro)
Sharaxaad : "Wiilka dhirta ah ee la riixay" Isticmaalaya xeeldheer ".
Miisaaniyadda : € 18,329
Mudnaanta Wii Ujeedo : Hoos goolka ugu sarreeya ee 36,000.
Maalgalin : Abriil 13, 2016
Ciyaarta : Saber Rider iyo Star Sheriffs (Kooxda Saber Rider)
Sharaxaad : Goobta ciyaaraha Retro 2D oo ku saleysan taxane kartuunada 1980-aad.
Leexan / Ujeedo : $ 96,592 / 75,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; $ 150,000 oo fuulin ah ayaa ka mid ah kuwa ugu hooseeya.
Maalgalin : Oktoober 5, 2015
Ciyaarta : Doolka 13-aad ee Dool
Sharaxaad : Ciyaartaan arimahaa soocay ee fasalka 7aad ee classic.
Miisaaniyad : $ 60,266 / 40,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Hoos wuxuu ahaa goolka ugu sareeya ee culus, $ 120,000.
Lacagta la bixiyay : Agoosto 27, 2015
Ciyaarta : La Dagaalanka Horyaalka (Micah Betts)
Tilmaamaha : 4-qof shakhsi ahaaneed.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 31,064 / 30,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : dhexdhexaad ah; $ 90,000 oo ah goolka geesaha ee Wii U iyo XB1.
Maalgalin : Juun 14, 2015
Ciyaarta : Ku soo dhawow meeraha X (Pop Sandbox)
Sharaxaad : Xilliga ciyaarta oo leh mawduuc indie-band.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 53,006 / 41,072
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; $ 75,000 oo ah goolka fidinta.
Maalgalin : Juun 5, 2015
Ciyaarta : Balotelli iyo Earl: Dib ugu soo noqosho
Faahfaahin : Qoob-ka-cayaarka ciyaarta Ma aqaan.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 400,000 / 508,637
Mudnaanta Wii Ujeedada: Heer dhexe-hoose, $ 800,000 oo ah bartilmaameed ballaaran.
Maalgalin : March 27, 2015
Ciyaarta : Jaahilnimada
Sharaxaad : Dhaqdhaqaaqa 3D-ficil.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 14,16113,666
Mudnaanta Wii U-ga : Dhexdhexaadinta ugu hooseeya, qoollaha ugu hooseeya ee qunsuliyadda $ 66,000
Maalgalin : Maarso 19, 2015
Ciyaarta : Tani waa Booliska (Waan Ku Qosleen)
Sharaxaad : Xeeladda istiraatiijiga ah.
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 35,508 / 25,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; $ 55,000 oo ah gool udhexeeya Wii U iyo PS Vita; ha ka dhigin.
Maalgalin : Febraayo 25, 2015
Ciyaarta : Madoowga Dhulka (Sand Sailor)
Sharaxaad : Qabow oo fiiri 2D tallaabo-qaadasho.
Miisaaniyad / gool : £ 25,000 / 28,485
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaadkoodu hooseeyo: Ma aysan sameynin $ 50,000 oo ah dabooli kara dhammaan 5 musqul.
Maalgalin : Oktoober 31, 2014
Ciyaarta : Magaalada Salem (BlankMediaGames)
Sharaxaad : Ololaha loogu talagalay qaybta la hagaajiyay ee ciyaarta ciyaaraha hadda jira.
Miisaaniyadda / goolka : $ 114,197 / 30,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Hoos yoolka aan kor loo qaadin.
Maalgalin : Oktoober 18, 2014
Ciyaar : Weeraryahan Arena (Wizcorp)
Sharax: "Dhaqdhaqaaq kubbadda cagta ah."
Miisaaniyadda / Yoolalka: $ 5,062 / 5,000 (CAD)
Mudnaanta Wii U : Aad u hooseeya; Lama helin $ 40,000 oo ah bartilmaameedka.
Maalgalin : Oktoobar 8, 2014
Ciyaarta : Dumarka Hunters (Kitfox)
Sharaxaad : Retro Action-RPG.
Miisaaniyad / Ujeedo: $ 178,986 / 45,000 CAD
Mudnaanta Wii Ujeedo : Low, hoos u dhac weyn oo ah $ 250,000 goolka lagu daray dhamaadka darawalnimada.
Maalgalin : Sebtembar 26, 2014
Ciyaarta : Ray's Dead (Ragtag)
Sharaxaad : Dhaqdhaqaaqa qunyar-socodka ah ee maskaxda.
Miisaaniyadda / Sucuudiga : $ 51,773 / 30,000
Muhiimadda Wii U Qaadista : Low, ma aysan sameynin $ 65,000 oo gool ah.
Maalgalin : Sebtembar 21, 2014
Ciyaarta : Super World Karts (Paul Hamilton)
Tilmaam : Kaarka Casaanka ah.
Miisaaniyadda / Himilada hore : $ 16,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Hoos ayaa ku guuldareysatay in ay $ 32,000 udiyaariso goolka Wii U.
Ciyaarta : Ballankii Loo diiday (Joshua Croft)
Miisaaniyadda / Himilada Asalka : £ 1,800 / 1,849
Mudnaanta Wii Ujeedo : dhexdhexaad ah; £ 3,750 Goolka geesaha. Dhallinyaradu way ku fashilmeen, Haddaba bal yaa yaqaan?
Maalgalin : Sebtembar 10, 2014
Ciyaarta : Difaacayaasha Aegis (Waaxda GUTS)
Sharaxaad : "Qalab Qaad ah oo 16-Daqiiqo ah."
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 145,815 / 65,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Hoos udhicii, maadaama ay ku guul darreysatay goolka Wii Ugaarka oo kaliya $ 5,000.
Maalgalin : Sebtembar 3, 2014
Ciyaarta : Midora (Epic Minds)
Sharaxaad : Retro RPG.
Miisaaniyadda / goolka asalka ah : $ 73,470 / 60,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad; goolka ugu horeeya ee goolka lagu bixiyo $ 80,000, inkastoo horumariyaha ayaa sheegay in ciyaarta ay imaan doonto Wii U ugu dambayntii.
Rajo-gelinta : Maalgalin.
Maalgalin : July 13, 2014
Ciyaarta : DieselStörmers (Black Forest)
Sharaxaad : Dhinaca is-gawaarida iyo gawaarida.
Miisaaniyadda / himilada asalka ah : $ 52,931 / 50,000
Mudnaanta Wii Ujeedo : Dhexdhexaad hooseeya. Qorshayaashooda degdegga ah ee loogu talagalay kombuyuutarrada, laakiin waxay yiraahdaan tani waxay iman doontaa guurka xiga.
Maalgalin : May 23, 2014
Ciyaarta : L a-Mulana 2
Tilmaamaha : Kala soocida wareejiyaha dhinaca wareejinta WiiWare.
Miisaaniyadda : $ 266,670
Mudnaanta Wii U : Aad u hooseeya; ayaa ku guuldareysatay inay la kulanto goolka isdhaafka, sidaas darteed uma badna inay sameeyaan Wii U.
Ciyaar: Qashinka Caanaha
Sharaxaad: "Isku dhafka waxqabadka, isdabajooga iyo waxyaallaha RPG oo leh qaab muuqaal oo 8-dabaq ah."
Miisaaniyadda: $ 7,075
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaadin: Uu guuldareystay inuu gaaro goolka Wii U, laakiin wuxuu sheegay inay wali wali noqon doonaan Wii U version.
Faahfaahin: Maqal muusikada saaran.
Miisaaniyadda: $ 34,250
Mudnaanta Wii U: Aad u hooseeya. Ma aysan sameynin goolkoodii, inkastoo ay weli lacag ururinayaan iyagoo bixiya Paypal waxayna yiraahdeen waxay jecelyihiin inay raadsadaan hab ay ku helaan Wii U.
Ciyaarta: Nidaamka Nidaamka Magaalada: Meel-hoosaad
Sharaxaad: Joogitaanka ruqsada ah ee NES ku garaacday.
Miisaaniyadda: $ 217,643
Mudnaanta Wii U: Aad u hooseeya; hadafka aan loo baahnayn.
Game: Ghost Song: Safarka Hope
Sharaxaad: Sidee-xoqin ee Wareegga Metroid.
Miisaaniyadda: $ 54,007
Mudnaanta Wii Ujeedo: Low, maadaama aysan sameynin goolkooda Wii U. Si kastaba ha ahaatee, waxay yiraahdaan waxay weli rajeynayaan inay u helaan Wii U mar uun.
Sharaxaad: Dhinaca istiraatiijiga ah ee xeeladaynta.
Miisaaniyad: $ 52,359
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad. Waxay ku guul dareysteen inay la kulmaan goolkooda Wii U, laakiin waxay u sheegeen Nintendo Enthusiast in xitaa haddii aysan aheyn goolkaas, waxay qorsheynayeen inay ciyaarta keenaan Wii U markii ay awoodaan.
Ciyaarta: Crypt Run
Faahfaahin: "Qalabka asaasiga ah ee maskaxda dhexe ee maskaxda."
Miisaaniyadda: $ 9,013
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad hooseeya. Waxay ku guul dareysteen inay la kulmaan goolkooda Wii U, laakiin waxay yiraahdaan waxay weli qorsheynayaan inay sii daayaan "console".
Ciyaarta: A Hat in Time
Faahfaahin: Mashruuca 3D-ga ee saameeya Zelda iyo Mario.
Miisaaniyad: $ 296,000
Taariikhda kuxiga: Juun 28, 2013
Mudnaanta Wii Ujeedo: Dhexdhexaad. Waxay yiraahdaan runtii waxay doonayaan in ay ku dhejiyaan masraxa, sababtoo ah Nintendo waa saameyn ku yeesha ciyaarta, laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan daabacaad Wii U, si aysan u ballan qaadin. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii ay jirtay xiiso aad u ballaaran oo ciyaarta ah oo ay gaartay 10 jeer bartilmaameedkeeda maaliyadeed, mid ka mid ah ayaa u maleynaya inuu qof xiiseynayo.
Game: Redwall: Warrior Reborn
Tilmaam: Ciyaar xiiso leh.
Miisaaniyad: $ 17,000
Mudnaanta Wii Ujeedo: Hoose. Mudnaanta koowaad waa PC / Mac, ka dibna iOS / Android. Konsoliyada kale "waa ikhtiyaari dhab ah laakiin ma jiraan wax ballanqaad ah."
Ciyaarta: Buddy & Me
Tilmaame: Isticmaalayaal loogu talagalay telefoonada smart.
Mudnaanta Wii Ujeedo: Hoose. Wii U ayaa lagu darey goolkii uu ku dhaliyey, laakiin maaha lacag ku filan. Hase yeeshee, horumariyaha ayaa sheegay in ay wali rajeynayaan in ay heli doonaan hab ay kuugu keenaan Wii U.
Ciyaarta: Rex Rocket
Mudnaanta Wii Ujeedo: Hoose. Qeybta kaliya ee la qorsheeyay waa PC, laakiin riyadoodu waa inay ku soo baxdo cayaaraha meel walba oo badan, oo ay ku jiraan Wii U.
Tilmaamaha Waalidka ee Wii U
Baro Mawduucyada Dhammaan Nintendo 3DS
Haggle: Qiimaha ugu Fiican ee Kubada Cagta ee Real Madrid
Baahida loo qabo Speed ​​Speed ​​Cheats iyo Secret - Gamecube
Nintendogs: Labrador iyo Cheats Friends
Dib u eegista Nintendo 2DS: Miyaad Iibsataa?
Kormeeraha Wii U Pro - Dib u Eegida Dhexdhexaadinta
Sidee Nashendo 3DS mashruucyada 3D?
Iskudhufiyaha Subwoofer Amplifier Isku Qaadista Booming Bass
Sida loo Isticmaalo iTunes inay noqoto Raadiyaha Internetka
Sida loo abuuro oo loo Isticmaalo Tusaalooyinka Email ee Muuqaalka
Taariikhda Sonic ee sannadka 25aad
Dareemo Qalab Remote Windows XP
Sida loo dajiyo Google Guryaha Google, Mini, iyo Speakers Smart Max
Maamulaha FileHippo App v2.0
CEDIA EXPO 2013 Isboortiga Khaaska ah
Maxay Tahay SGN?
Sida loo Sameeyo Gmail Gacantaada iPhone
Abuuri Goobtaada Taariikhda Qoyska
Genius 3 Utility Disk Utility - Dib u eegis
Sida loo Sameeyo Saxiixa Boostada ee Webmail GoDaddy
Sida Loo Abuuro Index Thumb for Document Word
Dammaanadda loogu talagalay Adaptor 8mm / VHS
Sidee loo Xalliyaa Dhibaatada DLL ee Dhibaatada Dhibta ah
Xogta deg-deg ah ee shabakadda IP 192.1.1
Wax ka Baro iMovie 11 iyo Qalabka Habeynta
Dib u eegista Apple iPod Shuffle (3rd Generation)